#48 saac oo loo qabtay dowladda Qatar inay ku aqbasho dalabkii Xulafada Sacuudiga - Get Latest News From Horn of Africa
#48 saac oo loo qabtay dowladda Qatar inay ku aqbasho dalabkii Xulafada Sacuudiga
July 03 (AxadleT)— Xulafada uu hoggaamiyo Sacuudiga ayaa muddo 48 saac u qabtay dowladda Qatar inay ku aqbasho dalabkoodii ka koobnaa 13 qodob, kaddib markii ay dhamaatay 10 maalmood oo ay horay ugu qabteen.
Dowladda Kuwait oo dhex dhexaadineysa Xulafada Sacuudiga iyo Qatar ayaa dalbatay in waqti dheeraad ah lagu daro, ka hor inta uusan dhicin waqtigii horay loogu qabtay ee 10-ka maalmood ahaa.
Bayaan ay si wada jir ah usoo saareen Kuwait iyo Sacuudiga ayay ku sheegeen in waqtiga loo kordhiyey Qatar.
Sacuudiga, Imaaraadka, Bahrain iyo Masar ayaa shantii June xiriirka u jaray Qatar, iyaga oo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada, isla markaana xulufo la tahay Iran.
Dowladda Qatar ayaa gebi ahaanba beenisay eedeymaha loo soo jeediyay, waxayna ku sheegtay kuwo aan sal laheyn.
Shuruudaha ay hor dhigeen Sacuudiga, Bahrain, Imaaraadka Carabta iyo Masar ayaa waxaa ka mid ahaa inay Qatar xiriirka u jarto Iran, ayna xirto Telefishinka Al Jazeera iyo Telefishinada kale ee hoos yimaada.
Shuruudaha oo ka koobnaa 13 qodob ayaa waxaa ku jiray in Qatar ay xirto saldhiga milateri ee Turkiga, isla markaana ay meesha ka saarto Ciidamada Turkiga ee ku sugan dalkaas.
Qatar ayaa gebi ahaanba ku gacan sertay dalabkan, waxaana ay ku tilmaamtay kuwo aan caqli gal aheyn.
Xulafada Sacuudiga ayaa xayiraad ganacsi iyo mid diblomaasiyadeed ku soo rogtay dalka yar ee ku yaalla Gacanka Khaliijka, waxaana haatan bil ka soo wareegatay markii ay ka dhex qaraxday dalalkan Carbeed xiisada diblomaasiyadeed.